» लिलीबिलीकी जसिता अझै सिंगल, यस्तो छ उनको सिक्रेट
लिलीबिलीकी जसिता अझै सिंगल, यस्तो छ उनको सिक्रेट
४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०२:२२
एजेन्सी, ०४ बैशाख । जसिता गुरुङ चलचित्र ‘लिलिबिलि’बाट अभिनयमा देखिएकी हुन् । चलचित्रका साथै अहिले उनको अभिनयको पनि चर्चा चलेको छ । चलचित्र प्रदर्शन अगावै हट एण्ड ब्युटीफुल भनेर चर्चामा आएकी उनी अहिले थप चर्चामा छिन् ।
पोखरामा जन्मिए पनि ७ बर्षको उमेरदेखि युकेमा रहँदै आएकी उनले उतैबाट ट्राभल एण्ड टुरिजममा अध्ययन पुरा गरेकी छिन् । अहिले हेयर र मेकअप डिजाइन अध्ययन गर्दै गरेकी उनको ‘लिलिबिलि’ डेब्यु चलचित्र हो । युकेमा आयोजित चलचित्रको अडिसनबाट अभिनयका लागि छानिएकी उनी अभिनय प्रतिको लगाब सानैदेखि रहेको बताउछिन् । युकेमा आयोजित बृहत नृत्य प्रतियोगीता युके डान्स कम्पिटीसनकी बिजेता समेत रहेकी उनको जोसँग पनि सजिलै घुल्न सक्ने स्वभाव रहेको उनी बताउँछिन् ।
‘जीवन एउटा यात्रा हो । यसमा उतार चढाप आइरहन्छ’ जीवनका बारेमा उनले राख्ने धारण हुन् यी । उनको चलचित्र अभिनयमा राम्रो गर्ने, सबैले चिन्ने पपुलर अभिनेत्री बन्ने सपना पनि छ । बिकसित मुलुमा बसेर हुर्किएकी यी अभिनेत्री प्रेममा त पक्कै होलिन् ? यो प्रश्नमा उनको जवाफ छैन भन्ने नै छ । ‘अहिले प्रेममा रमाउने बेला होइन । करियरमा फोकस गर्ने समय हो यसैमा फोकस छु’ उनी भन्छिन् ।
त्यसो त प्रेममा अफर आउने नगरेको पनि होइन उनलाई । प्रेममा अफर धेरै आउने गरेका छन् । तर उनले एसेप्ट गरेकी छैनन् । ‘अफर गर्नेलाई अहिले करियर बनाउने क्रममा छु । म तपाइहरुको अफर स्वीकार्न सक्दिन । मलाई बुझिदिनुस्’ भनेर आफुले सम्झाउने गरेको उनले खुलाइन् ।
जसिता गुरुङ, लिलीबिलीबाट लिइएका तस्बिरहरु
गोरो अनुहार ,आकर्षक जिउडाल लोभलाग्दो बैसले भरिएकी यी अभिनेत्री कस्तो केटा मन पर्छ ? प्रश्न राख्न नपाउदै जवाफ फर्काइन् ‘मलाई बुझ्ने, कुरा मिल्ने, सबैको ख्याल गर्ने, अरुलाई इज्जत गर्ने, सम्मान दिने केटा मनपर्छ ।’
पहिलो चलचित्र नै चर्चित अभिनेता प्रदीप खड्कासँग स्क्रिन शेयर गर्न पाएकोले आफुलाई भाग्यमानी ठान्ने यी जसिता घुम्न त्यती मन पराउदिनन् । भन्छिन् ‘मलाई घुम्नभन्दा पनि खाना बनाउन फ्यामिलिसँग रमाउन र चलचत्रि हेर्न मनपर्छ ।’ मेनुका प्रधान, साम्राज्ञी र प्रियंकाको अभिनय मन पराउने उनी आफ्नो सौदर्यमा धेरे ख्याल गर्दिनन् रे । ’सामान्य मेकअफ त गर्नु पर्यो नै । त्यो भन्दा बढी म स्क्रिनको ख्याल गर्छु । म, धेरै कस्मेटीक आइटम प्रयोग गर्दिन ।’ उनले भनिन् ‘मेकअपमा सधै प्रयोग गर्ने भनेको आइल्याण्डर, आइस्याडो लगायत हुन् ।’
मेकअप तिर त्यति रुचि नभएपनि फिटनेमा सजक यी अभिनेत्री जिम जान्थे गर्दछिन् । तर केही समय अगाडी देखि यो पनि बन्द भएको छ । चलचित्र अभिनयका कारणले जिम जान नभ्याएकी उनले घरमै ट्रेडमिल किनेकी छन् । त्यसमा दौडिएर रेगुलर एक्सरसाइज गर्ने उनले बताइन् ।
फे्सनको मावलामा भने यी अभिनेत्री त्यती स्वखिन छैनन् । ‘अहिले के कस्तो चलेका छन् सबै । भनेर फलो गर्ने खालको छुइन म’ उनले थपिन् आफुलाई राम्रो लाग्ने, लगाउन सजिलो हुने जुनै पहिरन पनि प्रयोग गर्छु ।’ पाइट र टिसर्ट आफुलाइृ लगाउन सजिलो हुने बताउने यी अभिनेत्री वान पिसमा भने निकै राम्री देखिन्छिन् ।
दोहोरी च्याम्पियनमा ४ हप्ता दोहोरी मै भिडन्त, को पुग्ला सेमिफाईनलमा ?
कमेडी च्याम्पियनका उत्कृष्ट ३ फाईनालिष्टहरु